Mro Traditional Weaving – MYANHOUSE
Lotus & Silk
Natural Dye Shawl & Scarf
Mro Traditional Weaving
Chin Traditional Woven Longyi
Souvenir of Myanmar
Bronze Triangular Gong
Coconut Shell Art
Indian Red Sandalwood
Amber Fossil Inclusions
Copper Mixed Amber Accessories
Category: Mro Traditional Weaving
မြိုရိုးရာရက်ကန်း (Mro Traditional Weaving)
၀တ်စုံရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတိုင်းကို ရိုးရာဂျပ်ခုတ်ရက်ကန်းနဲ့ ရက်လုပ်တဲ့ မြိုရိုးရာ ၀တ်စုံဟာ အသေးစိတ်ပြီး ကျစ်လစ်လှပတဲ့ ဒီဇိုင်းဖွဲ့စည်းပုံရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးများရဲ့ အိမ်တွင်းလက်မှုဖ်ြစတာကြောင့် မြိုရိုးရာ ၀တ်စုံဟာ ရိုးရာအစဉ်အလာရဲ့ ပြယုဂ်ဖြစ်တဲ့အပြင် မြိုအမျိုးသမီးတို့ရဲ့ အနုပညာအမြင်၊ စိတ်ရှည်အသေးစိတ်မှုနဲ့ နူးညံ့တဲ့ စိတ်ထားတွေကိုပါ မြင်နိုင်တဲ့ ၀တ်စုံလို့ ဆိုရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံ စုပေါင်းနေထိုင်ရာ အချို့မှာ လူဦးရေ အနည်းစုသာကျန်ရှိ၍ တိမ်မြုပ်လုနီးပါးအခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ထိုသို့ လူဦးရေ နည်းပါးသော်လည်း ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှု၊ ရိုးရာထုံးတမ်းနှင့် ကိုယ်ပိုင်စာပေရှိသော လူမျိုးတစ်မျိုးမှာ ‘မြို’ လူမျိုးပင် ဖြစ်သည်။ လူမျိုးကွဲများစွာရှိသည့်အတွက် ၀တ်စားနေထိုင်ပုံလည်း အတန်ငယ်ကွဲပြားကြရာမှ ရှေးမြိုအမျိုးသားတို့သည် အပြာရောင်အ၀တ်ရှည်ကိုခါးတောင်းကျိုက်၍ ၀တ်ဆင်ကြ၍ အမျိုးသမီးများမှာ အင်္ကျီဝတ်ကြရိုးထုံးစံမရှိဘဲ၊ နက်ပြာရောင် အ၀တ်စကို ဒူးဆစ်အထိ ရစ်ပတ်ဝတ်ဆင်ကြသည်။ အဆင်တန်ဆာအဖြစ် ပုတီးစေ့ကြိုးများနှင့် ကြေးနီခွေများကို ၀တ်ဆင်လေ့ရှိကြသည်။ ငွေထည်များကိုလည်းအဆင်တန်ဆာအဖြစ် ၀တ်ဆင်လေ့ရှိကြသည်။ိ
မြိုအမျိုးသမီးတို့သည် အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းအဖြစ် ဂျပ်ခုတ်ရက်ကန်းရက်ခြင်းကို လုပ်ကိုင်ကြပြီး ၄င်းတို့အစုအဖွဲ့အတွင်းမှာပင် ရက်လုပ်ရောင်းချလေ့ရှိကြသည်။
မြိုရိုးရာ ရက်ကန်းထည်တစ်ထည် ရရှိရန်အတွက် အနည်းဆုံး (၁၀) ရက်မှ နှစ်ပတ်ထိ ကြာမြင့်တတ်သည်။ ရှားပါး၍ ရက်လုပ်သူ အလွန်ရှားပါးနေပြီဖြစ်သော မြိုရိုးရာ ရက်ကန်းထည်တစ်မျိုးမှာ ရက်လုပ်ချိန် (၁) အထိကြာမြင့်၍ အလွန်သေးငယ်လှပသော အကွက်စိတ်များဖြင့် လှပလွန်းလှသည်။ မြိုရိုးရာ ရက်ကန်းတွင် ပုဝါသည် ထင်ရှားသည့်အထည်ဖြစ်ပြီး ထိုပုဝါကိုပင် အမျိုးသားဝတ်၊အမျိုးသမီးဝတ် အ၀တ်အထည်များချုပ်လုပ်ဝတ်ဆင်ကြသည်။
Every single part of Mro traditional dress is astonishing with detailed and neat design composition. Since it is the hand works of Mro women, they also make us see not only the tradition and cultural value Mro people, but also the artistic view and creation of Mro women.
Mro Traditional Shawl (Mro Traditional Weaving)
In Myanmar, hundreds of tribes are living and some of them are in danger to extinct with very few populations remained. Mro, with few populations spreading through the regions and with their own culture, traditions and literature, is one of those minority tribes.
Mro people are spreading in the lands within Sittwe District, Butheetaung region, Palatwa, Matupee, Pee Chaung and Mee Chaung (Chin Region). Historical facts show that Mro has nearlyahundred of sub-tribe under it.
Ancient Mro men wore blue girded loins and women wore topless and dark blue short skirt with beads and coppers rings or strings at their waist as the accessories. And they sometimes wear sliver accessories. Mro women make woven clothing for themselves from their home’s back strap loom and sell within their community.
‘Mro’ traditional weaving takes at least from (10) days to (2) weeks. A very rare found piece in elegant design with very detail hand works takes at least (1) month and very few people can weave that design nowaday. Shawls are widely used and popular among all Mro traditional weaving and they made both men and women wears out of Mro traditional shawls.
Author Kyaw LinnPosted on April 1, 2019 April 1, 2019 Categories Mro Traditional WeavingLeaveacomment on မြိုရိုးရာရက်ကန်း (Mro Traditional Weaving)
MYANHOUSE Local Made
MYANHOUSE Blog at WordPress.com.